ॐ लेख्दै वि.सं. २०७६ कात्तिक २ गते शनिवारको राशिफल् पढ्नुहोस आजको कार्य सफल हुनेछ – Hamrosandesh.com
ॐ लेख्दै वि.सं. २०७६ कात्तिक २ गते शनिवारको राशिफल् पढ्नुहोस आजको कार्य सफल हुनेछ
वृष-आफ्नो शारीरिक तन्दुरूस्ती कायम गर्नको लागि तपाईंले आज केही खेल गतिविधिहरूको आनन्द लिने सम्भावना छ। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। तपाईंको जोडीले आनन्द दिने प्रयास गर्नाले आज आनन्द भरिएको दिन हुनेछ। तपाईं एक पटक आफ्नो जीवनको प्रेम भेटेपछि, अरू केही आवश्यक पर्ने छैन। तपाईंले आज यो सत्यको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। छुने, चुम्बन, अंकमाल आदि कुराको वैवाहिक जीवनमा विशेष महत्त्व छ। तपाईंले यसलाई आज अनुभव गर्नु हुनेछ।
मिथुन-आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। आज तपाईंमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरू र साथै साथीहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्नाले नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास जाग्नेछ। एउटा आश्चर्यको सन्देशले तपाईंलाई राम्रो सपना दिनेछ। आज तपाईंले किनमेल गर्न जानुभयो भने आफैलाई राम्रो पहिरन सामाग्री छनोट गर्न सम्भावना छ। तपाईंको जोडी यति सुन्दर कहिल्यै थिएन। तपाईंलाई आफ्नो जीवनको प्रेमबाट राम्रो आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
कर्कट-आफ्नो स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर हल्ला नगर्नुहोस्। पैसाको समस्या दिनको पछिल्लो भागमा सुधार हुनेछ। बच्चाहरुले अध्ययन र योजनामा ध्यान केन्द्रित गरेर भविष्यको लागि सोच्नु आवश्यक छ। प्रेम सम्बन्ध बारे चर्को हल्लाखल्ला नगर्नुहोस्। आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। आफ्नो जन्मदिन बिर्सेको वा केही अन्य कुरा बिर्सेको जस्ता साधारण कुरामा आफ्नो जोडीसित पुरानो मुद्दामा आज तपाईं भिड्न सक्नु हुन्छ। तर, सबै कुरा दिनको अन्तमा ठीक हुनेछ।
शिंह-कसैले तपाईंको मुड बिगार्न सक्छ तर यी झिझोहरू तपाईंमा पर्ने अनुमति नदिनुहोस्। यी अनावश्यक चिन्ता र पीरहरूले तपाईंको शरीरमा प्रभाव पार्न सक्छन् र छालाको समस्या हुन सक्छ। आर्थिक सुधार निश्चित छ। तपाईंका नजिकका मानिसहरूले व्यक्तिगत स्तरमा समस्या सिर्जना गर्नेछन्। तपाईंको कार्डमा तलाउमा सुन्दर बास भेट्ने सम्भावना उँचो छ। नयाँ विचारहरूलाई जाँच्ने सही समय। आज, तपाईं र तपाईंको जोडीले साँच्चै गहिरो आत्मीय प्रेमालाप गर्नु हुनेछ।
कन्या-केही मनोरञ्जनको लागि आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किने प्रयास गर्नुहोस्। आज तपाईंले सजिलै धन बढाउन सक्नुहुन्छ – उल्लेखनीय ऋण सङ्कलन गर्नुहुन्छ – वा नयाँ परियोजनाहरूमा काम गर्नको लागि धनको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। परिवारको भेलामा तपाईं सबैको केन्द्रविन्दु हुनुहुनेछ। तपाईंका प्रेमीको अत्यधिक माँग गर्ने व्यवहारले आज रोमान्स कम नै हुने सम्भावना देखिन्छ। टाढाको यात्रा आरामदायक हुनेछैन – तर महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बनाउन मद्दत गर्नेछ। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग प्रेम गर्ने प्रशस्त समय पाउनु हुनेछ, तर स्वास्थ्यमा केही समस्या हुन सक्छ।
तुला-व्यस्त समय भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्। आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण राख्नुहोस् किनकि यसले तपाईंका हजुरबा हजुरआमाको भावनामा चोट लाग्न सक्छ। फतफताएर आफ्नो समय बर्बाद गर्नुभन्दा मौन बस्नु राम्रो हो। हामी समझदार गतिविधिहरुको माध्यमबाट जीवनको अर्थ दिन्छौं भनेर बुझ्नुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान राख्नुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। अचानक भएको रोमान्टिक तर्कले तपाईंलाई भ्रममा पार्न सक्नेछ। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज सबै खुसी देखिन्छ।
वृश्चिक-फिटनेस र वजन घटाउने कार्यक्रमले तपाईंलाई राम्रो आकार बस्न मद्दत गर्नेछ। आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस् – तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्। वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेशको लागि राम्रो समय। सामाजिक बाधाबाट छुटकारा पाउन असमर्थ। तपाईंलाई मद्दत गर्ने मानिसहरूको लागि तपाईंले प्रतिबद्धता बनाउनु हुनेछ। तपाईंले आज आफ्नो जोडीको कठिन र साहसी पक्षको अनुभव गर्न सक्नु हुन्छ जसले गर्दा तपाईंले असहज महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
धनु-खानाको आफ्नो स्वाद नुनको बलले हुन्छ – केही दुख जरूरी हुन्छ अनि मात्र तपाईंले आनन्दको मूल्य महसुस गर्नुहुनेछ। लगानीको लागि सिफारिस गरिन्छ तर उचित सल्लाह लिनु आवश्यक छ। आफ्नो परिवारको हितको लागि कठिन काम गर्नुहोस्। तपाईंको कार्य प्रेम र सकारात्मक दृष्टिद्वारा गरिएको हुनुपर्छ, तर लोभद्वारा होइन। तपाईं मायालु मुडमा हुनुहुनेछ – त्यसैले आफ्नो र आफ्नो प्रियको लागि विशेष योजना बनाउने निर्णय गर्नुहोस्। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनको यो सबैभन्दा राम्रो दिन हुने छ। तपाईंले प्रेमको साँचो परमानन्द अनुभव गर्नु हुनेछ।
मकर-असम्भवको लागि अनावश्यक सोचाइमा आफ्नो ऊर्जा बर्बाद नगर्नुहोस्, बरु यसलाई सही दिशामा प्रयोग गर्नुहोस्। आर्थिक सुधार भएमा तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण खरीद गर्नको लागि सुविधा हुनेछ। अरूलाई प्रभावित गर्ने तपाईंको क्षमताले फाइदा पुर्याउनेछ। तपाईंको समर्पित र शुद्ध प्रेममा रचनात्मक शक्तिको जादू छ। नयाँ विचारहरूलाई जाँच्ने सही समय। तपाईंको जीवनसाथी कहिल्यै आजभन्दा रमाइलो थिएनन्।
कुंभ-कुनै संत झैं व्यक्तिको आशिषले मनोशान्ति दिनेछ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। आज तपाईंको लागि नयाँ ढाँचा – नयाँ दृश्टि – नयाँ मित्र हुन सक्छन्। तपाईंले आज प्रेम प्रदूषण फैलाउनु हुनेछ। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। तपाईंलाई आज विवाहको साँचो परमानन्द थाहा हुनेछ।
मीन-तपाईंलाई साह्रै तनाउ भएको महसुस भयो भने – बच्चाहरुसँग बढी समय बिताउनुहोस्। तिनीहरूको न्यानो अंकमाल / लुटुपुटु वा निर्दोष मुस्कानले तपाईंलाई आफ्नो दुःखबाट छुटकारा मिल्न सक्छ। आफ्ना मित्रको मद्दतले वित्तीय समस्याहरुको समाधान गरिनेछ। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। भोलि धेरै देरी हुन सक्छ यसैले तपाईंले आफ्नी प्रियतमालाई आफ्नो सन्देश व्यक्त गर्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। रोमान्टिक गीतहरू, खुशबूदार मोमबत्ती, राम्रो खाना, र केही पेयहरू; यो दिन आफ्नो जोडीसित यस्तै नै हुनेछ।